अटोमोवाइल क्षेत्रलाई २ वर्ष अघि... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
अटोमोवाइल क्षेत्रलाई २ वर्ष अघि नै स्किमको कोरोना लागिसकेको थियोः भट्टराई
भिजी अटोमोवाइल्सले विगत ७ वर्षदेखि नेपालमा सुजुकीका दुइपांग्रे सवारीसाधन विक्री वितरण गदै आइरहेको छ। सुजुकिका केही मोडलका मोटरसाइकल निकै चर्चित भएपनि कम्पनीले हालसम्म बजारमा आफूलाई टप ब्राण्डको रुपमा स्थापित गर्न सकेको छैन। त्यस्तै सुजुकीको स्पेयर पाट्स महंगो र भनेको समयमा नपाइने भन्ने पनि ग्राहकको गुनासो सुनिन्छन्। यी नै विषयमा हामीले भिजी अटोमोवाइल्सका उप महाप्रवन्धक धिरज भट्टराईसगँ कुरा गरेका छौः
नेपालमा सुजिकिको २ पांग्रे सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ?
विगत ७ वर्षदेखि सुजुकीका दुइपांग्रे सवारीसाधन हामीले विक्रि वितरण गर्दै आइरहेका छौ। यो अन्तरालमा हामीले वार्षिक ८ देखि ९ हजार युनिट विक्री गरिरहेका छौ। प्रोडक्टअनुसार सेल्स किन भएन भन्दा बजार धेरै प्रतिश्पर्धि हुँदै गयो। विगत ५ वर्षदेखि टप ब्राण्डहरुले पनि ठूलो –ठूलो स्किम दिएर आफ्नो उपस्थिती जनाइराख्नु भएको छ।
यस्तो प्रवित्तीको कारणले ग्रोथ दिन खोजिरहेका ब्राण्डलाई पनि ठूलै स्किममा जानुपर्ने र स्किम बेस्ड प्रतिशपर्धा भएको कारण सोचेको जस्तो ग्रोथ भएको छैन। तर जति पनि हामीले मोटरसाइकल बेचिरहेका छौं त्यो उच्च गुणस्तरको र त्यसका ५ वर्षको वारेन्टी प्रदान गर्छौं।
तपाईहरु भन्दा पछि डिलरसिप दिएकाहरुले तपाईहरुले भन्दा आक्रमक सेल्स गरिरहेका छन् नी?
हामी भन्दा पछि डिलरसिय लिएर रफ्तार लिएको ब्राण्ड भारतीय प्रोडक्ट हो। सुजुकी भारतबाट आएपनि हामी जापानी प्रोडक्टको रुपमा लिन्छौ। भारतीय जुनसुकै ब्राण्डको प्रोडक्टहरुको मूल्य उस्तै–उस्तै हुन्छ र जापानी प्रोडक्टहरुको मूल्य करिव–करिव उस्तै हुन्छ। भारतीय भन्दा हाम्रो प्रोडक्टको मूल्य केही बढी हुन्छ।
किनभने जापानी कम्पनीहरुले गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्दैन। त्यस्तै हामी भन्दा पछि डिलरसिप लिएको त्यो ब्राण्ड को बजार पनि नेपालमा राम्रो थियो। तर सुजुकीको वार्षिक सेल्स १५ सय भन्दा माथी उठ्न सकेको थिएन।
१५/२० वर्ष खराब स्थितीबाट चालाएको प्रोडक्टलाई ग्राहकको रोजाइमा ल्याउन निकै कठिन छ। त्यसैले पहिलेको डिलरले कसरी काम गर्यो भन्नेमा पनि भर पर्छ। भारतीय प्रोडक्टको स्पेयर पाट्स पनि केही सस्तो हुन्छ तर हाम्रो महंगो छ। त्ययसैगरी पुराना टप भनिएका ब्राण्डको स्किमले नयाँ ब्राण्डलाई उक्सिन दिएको छैन र बजार पनि बिगारेको छ।
अहिले कुन प्रोडक्ट चलेको छ/छैन त्यो सगँ सरोकार छैन, सबै ब्राण्डलाई एनीहाउ सेल्स बचाउ भएको छ।कोरोना त अहिले मात्र आएको हो तर अटोमोवाइल क्षेत्रमा २ वर्ष अगाडिनै कोरोना लागेको थियो।
चलेको ब्रण्डले चाहिने भन्दा बढी स्किम दिएपछि कोरोना लागेन अहिले हेर्दा केही ब्राण्डको सेल्स धेरै देखिन्छ तर भित्र–भित्र खोक्रो छ। नेपालको दुइपांग्रे सवारी साधनको बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। यसले यो क्षेत्र दुर्घटना तर्फ लम्बदै छ। पुराना टप भनिएका ब्राण्डको स्किमले नयाँ ब्राण्डलाई उक्सिन दिएको छैन र बजार पनि बिगारेको छ।
सजुकीको स्पेयर पाट्स नपाउने र महंगो छ भन्ने गुनासो सुनिन्छन् नी?
हामीले ५ वर्ष वा मोटरसाइकलमा ७० हजार किलोमिटर स्कुटरमा ६० हजार वारेन्टी दिएका छौ। हामी आफ्नो प्रोडक्टमा यती धेरै विस्वस्त छौ। मोटरसाइकलमा दुर्घटना निम्त्याने, चाडै बिग्रने लगाएतको मूख्य पाट्र्सहरु ती भनेको निकै उच्च गुणस्तरको हुन्छ।
यस कारणले केही महंगो होला। अब आयो पाट्सको अभावको कुरो। हामीले अर्डर गरेको ९० दिन भित्र सामान आइपुग्छ। आज टप ब्राण्डहरुको पनि पहिले स्थिती यस्तै थियो। जब कुनै ब्राण्ड चल्दै जान्छ स्पेयर पाट्स बनाउने कम्पनीहरुले त्यो प्रोडक्टको कपी पाट्स बनाउन थाल्छन्।
त्यसले गर्दा पनि चल्तिका प्रोडक्टको पाट्स अभाव हुँदैन।
हामीले भने नयाँ मोटरसाइकलको खोलेर हुन्छ की द्रुत गतीमा मगाएर भनेपनि ग्राहकलाई पाट्स उपलब्ध गराउछौं। त्यस्तै सुजुकीको पाट्स पाइदैन भन्ने जुन गुनासो थियो त्यसलाई हामीले धेरै सुधारेका छौ। विगत १ वर्षदेखि सुजुकीको स्पेयर पाट्सको उपलब्धता ७० देखि ८० प्रतिशत बनाएका छौ। कुनै पनि ग्राहकले स्पेयर पाट्स पाउनु भएन भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुस। हामी नेपाल भर सम्पर्क गरेर भनेपनि उपलब्ध गराउछौ। नेपाल भर नै त्यो सामान छैन भने पनि २५ देखि ३० दिन भित्रमा ल्याइदिन्छौ।
लकडाउन पछि सेल्स उठाउन तपाईहरुले के गरिरहनु भएको छ?
हामी पनि अरु ब्राण्डले झै स्किम ल्याएका छौ। यसमा सियोर सट १५ हजार छुट दिएका छौ। एक्स चेन्ज र किस्तामा किन्नेलाई पनि यो छुट दिन्छौ तर केही कन्डिसनहरु छन्।
सुजुकीको मोटरसाइकल र स्कुटर किन्न चाहानेले के प्रकृया अपनाउनु पर्छ?
डिलरको हकमा उहाँहरुको विभिन्न फाइन्यान्स सगँ सम्झौता छ। ग्राहक डिलरको सम्पर्कमा गएपछि डिलरले नै फाइन्यासको व्यवस्था गरिदिन्छ। यहाँ आउने ग्राहकको लागि हामीले मञ्जुश्री फाइन्यान्स सगँ सम्झौता गरेका छौ। ग्राहकले इन्स्टलमेन्टको पिर गर्नु पर्दैन।
तपाइहरुको जस्तो सेवा त अरु ब्राण्डले पनि दिएका छन्, सुजुकीनै किन किन्ने?
सुजुकी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रख्यात ब्राण्ड हो। सुजुकीको गुणस्तरमा शंका गर्ने ठाउँ छैन भन्ने कुरा त हामी घमण्ड गरेरै भन्छौ। कुनै ग्राहकले यसको गुणस्तरको बारेमा बुझ्न चाहेमा इन्जिनियरिङ पक्षबाट प्रमाणित गर्न सक्छौ। सुजुकीका ९० प्रतिशत ग्राहक गुणस्तरसगँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।
अन्तिममा, मोटरसाइकल तथा स्कुटर किन्न चाहानेहरुलाई केही भन्नु छ?
मोटरसाइकल तथा स्कुटर किन्नु भन्दा पहिले सबै ब्राण्डको बारेमा बुझेर मात्र किन्नु होला। अफर मात्र नहेर्नु होला। त्यो ब्राण्डको इतिहास केहो र कती सुरक्षित छ त्यो अध्ययन गर्नुहोला। सुजुकीले ५ वर्ष वारेन्टी दिएको छ भने के आधारमा दियो होला त। सुजुकी आफ्नो प्रोडक्टमा यति धेरै कन्फिडेन्ट किन छ, यो कुरा याद गर्नु होला।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १, २०७७, १०:५६:००